Mpitsara ao amin' ny Baiboly - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Mpitsara ao amin'ny Baiboly)
Ny mpitsara ao amin' ny Baiboly dia olona nomen'Andriamanitra fahefana ka tsy hoe hitsara fotsiny fa indrindraindrindra hitondra ara-pôlitika na ara-tafika ihany koa mba hanafaka ny firenena israelita amin'ny fangejan'ireo firenena miady aminy. Amin'ny teny hebreo dia שופט‬ / shofet (raha tokana) na שופטים‬ / shoftim (raha maro) no ilazana ny mpitsara.
Ao amin'ny Baiboly hebreo dia voalaza fa shofet ("mpitsara") teo amin'ny Israelita i Mosesy ary nanendry mpitsara hafa izay nomeny fahefana amin'ny zavatra sasany araka ny tolokevitr'i Jetro, rafozan-dahiny madianita (Eksôdosy 18.13-26), izy. Ny Bokin'ny Mpitsara dia miresaka ny amin'ny mpitsara roa ambin'ny folo izay nitsara an'i Israely: i Ôtniela, i Ehoda, i Samgara, i Debôrà (vehivavy), i Gideôna, i Tôlà, i Jaira, i Jefta, i Ibtsana (na Ibzana), i Elôna, i Abdôna ary i Samsôna. Ny Boky voalohan'i Samoela dia miresaka an'i Ely sy i Samoela, ary koa i Jôela (na Jôely) sy i Abia (izay samy zanaka lahin' i Samoela). Ny Boky voalohan'ny Tantara dia miresaka an'i Kenania sy ireo zanany lahy. Ny Boky faharoan'ny Tantara dia miresaka an'i Amaria sy i Zebadia (zanak'i Ismaela).
Amin'ny ankapobeny dia tsy manao ireo mpitarika ireo ho "mpitsara" ny lahatsoratry ny Baiboly, fa milaza fotsiny fa "nitsara an'i Israely" izy ireo, amin'ny fampiasana ny matoanteny hoe שָׁפַט / sh-f-t. Ohatra, "nitsara an'i Israely" i Ôtniela (Mpits. 3.10), "nitsara an'i Israely i Tola nandritra ny telo amby roapolo taona" (Mpits. 10.2) ary i Jaira nitsara an'i Israely nandritra ny roa amby roapolo taona (Mpits. 10.3).
Anjara asan'ny mpitsara[hanova | hanova ny fango]
Na dia fandikana ara-bakitenin'ny teny hebreo ampiasaina ao amin'ny lahasoratra masôretika aza ny teny hoe shofet "mpitsara", ny zavatra resahina dia mifanandrify kokoa amin'ny asan'ny mpitarika (Mpits. 12.7-15) fa tsy famoahana didim-pitsarana. Na dia izany aza dia manohana ny heviny i Cyrus H. Gordon amin'ny filazana fa ny mpitsara dia mety ho avy amin'ny mpitarika nisahana asam-pitarihan-tafika nifandovana amin'ireo saranga ambony teo amin’ny fitondrana, sahala amin'ny mpanjaka (grika: basileis) tantarain'i Homera. I Coogan kosa dia milaza fa tokony ho lehibem-poko, izay tsy araka ny fitantaran'ireo mpitantara deoterônômista izay milaza fa mpitarika an'i Israely manontolo izy ireo . I Malamat anefa manantitra fa ao amin'ny lahatsoratra, ny fahefan'ny mpitsara dia voalaza neken'ny vahoaka monina amin'ny faritra voafetra na amin'ny foko hafa tsy nipoirany.
Ny sokaji-mpitsara ao amin'ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]
i Ôtniela (Mpits. 3.8-11)
i Debôrà (Mpits. 4-5)
i Gideôna (Mpits. 6-8)
i Samsôna (Mpits. 13-16)
i Tôlà (Mpits. 10:1-2.)
i Elôna (Mpits. 12.11-12)
i Abdôna (Mpits. 12.13-15)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mpitsara_ao_amin%27_ny_Baiboly&oldid=1041893"
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 04:29 ity pejy ity.